प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण अहिले चर्चाको शिखरमा छ। एक जनालाई बनाएकै दिन अदालतले रोकिदियो र पछि बदर नै गरिदियो। अदालतले अर्का एक जनालाई बनाउन संकेत गर्दै फैसला गर्यो तर त्यसको
मुलुक अहिले अप्ठेरोमा रहेको धरहरा वरपरका चर्चाले पनि बताइरहेको छ । निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कुरा धेरै छन् । जनताका थुपै्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ
सफा सुन्दर शहर एकादेशकै कथा भो। वागमती नदी र विष्णुमति खोला गन्हाएर हिँडिसाध्यै छैन्। राजधानीमा यस्तो एक जना मान्छे भेटाइँदैन जो मुन नछोपी हिडोस्। हरेक मान्छे मुख छापेर हिडनुपर्ने अवस्था
हात्तीभन्दा हल्ला ठूलो
हात्तीभन्दा हल्ला ठूलो भन्ने भनाइ निकै चर्चामा छ। काम सिन्को नभाँच्ने गफ ठूला गर्ने त राजनीतिको धर्म र परम्परा नै हो। अहिले निर्वाचनको चटारो छ। मधेसी मोर्चाको धम्की र घुर्की
खै! हर्नमुक्त अभियान के हुने हो
वैशाख १ बाट राजधानीलाई हर्नमुक्त बनाउने अभियानको घोषणा सरकारी तवरबाट भएको सुन्दा धरहरा खुसीले गदगद भएको मात्रै होइन अब यो बुढो कानले हाइसन्चो पाउने भो भन्नेमा ढुक्क के भएको थियो।
चुनावको माहोल छ। राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो शक्ति बढाउनका लागि दौडधूप गर्दै छन्। यही दौडमा आज धराहराको दूरबिनले विजय गच्छादारलाई पहिचान गरेको छ। शक्ति र सत्ताको भोगीका रूपमा प्रख्यात गच्छादारले शक्ति
एकजना विदेशीले नेपालका बारेमा गरेको चिन्ताले धरहराको मन छोएको छ । उमेरले भर्खर २२ टेकेकी आनाले नेपालप्रति देखाएको समर्पण भावले धरहरा नतमस्तक भएको छ । पहिलोपटक आफ्नो देश अमेरिका छोडेर
हैट, अमेरिकी सेना !
संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना कहाँको भन्दा सबैले उत्तर दिने गर्छन्– संयुक्त राज्य अमेरिकाको। धरहरा पनि यही भनाइमा विश्वास राख्दै आएको थियो। तर, यो गलत हो भन्ने धरहरालाई अहिले लागेको छ।
बहादुर भवनका कुरा
अहिले मुलुकमा स्थानीय चुनावको चर्चा उचाइमा छ। स्थानीय चुनावको चर्चाले गाउँवस्ती सबैतिर एक खालको रौनक बढिरहेको धरहराले देखेको छ। केहीले चुनावमा नजाने भनेर निहुँ खोजिरहे पनि जनता भने जसै गरी
‘फुल’ का गफ
धरहरावरपर आएर हिजो थुप्रैले ढाँटढुँट कुरा गरेको सुनेर धरहरालाई भने विरक्त लागेको छ। त्यसो गर्नुको मतलब हिजो अंग्रेजी सम्बतअनुसार अप्रिल १ परेर हो रे। हामी नेपालीको बानी पनि विचित्रको छ।
स्थानीय चुनाव हुने लगभग पक्का भए पनि चुनौतीरहित अवस्था भने अझै पनि छैन। मतदानपछि चाहिने मसीसमेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र त्यो दिन नसक्ने भनेर कुनै मित्रराष्ट्रले खबर गरेको धरहराले सुनेको छ।
लिनेदिने नै दरिद्र
भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष अहिले नेपाल भ्रमणमा रहनुभएको छ। नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको दज्र्यानी चिन्ह लिन नेपाल आउनुभएका भारतीय सेनाध्यक्ष बिपिन रावतले नेपाली सेनालाई ७ वटा घोडा उपहार दिएपछि लिने र दिनेको
हिजो प्रधानमन्त्री पुकदा चीन भ्रमण सकेर आउनुभएको छ। उहाँले विमानस्थलमै चुनाव हुन्छ शंका नगरौं भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको पनि धरहराले आफ्नो बाइनाकुलरमा छायांकन गर्न पायो। त्यही त हुने भनेर तिथि नै
पाका नेताहरू काम लागेनन् अब युवालाई राजनीतिमा स्थान दिइयो भने चाहिं मुलुकले केही गर्ला कि भन्ने आशा नेपाली जनमानसमा पाइन्छ। तर, राजधानीको आरआर क्याम्पसबाट हायलकायल भएर हिजो यो धरहराको छेउसम्म
ओहोदामा बस्नेले सार्वजनिक गतिविधि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा धेरै हुन्छन्। खास गरी देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश गएका बेलामा यो कुरा निकै खड्किन्छ। एक पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील दा अमेरिका भ्रमणमा
भारत गएका बेलामा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता म्याडमले भेटघाटका क्रममा हात बाँधेर बसेको भनेर धेरैले आलोचना गरेको धरहरालाई राम्रैसँग याद छ। त्यति बेला मान्छेले के के न भयो भनेजस्तो नगरेका पनि
चिचि पनि पापा पनि
स्थानीय चुनाव होला कि भन्ने धरहराले आशा गरे पनि पछिल्ला केही गतिविधिले भने अब नहुने हो कि भन्ने धरहरालाई पनि लाग्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधान सच्याएको कुरा आएको
तर मार्ने काइदा
मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै विदेशी कम्पनीको कर्मचारी बस्न मिल्ने कि नमिल्ने अहिले धरहरा छेउछाउमा यस बारेमा धेरै तर्क सुनिएका छन् । कुरा मुख्य सचिवको हो । अहिलेका
धुलो र विश्व किर्तिमान
धुलो धुवाले राजधानीका बासिन्दा अहिले आक्रान्त भएको धरहराले देख्दै आएको छ । सरकार राजधानीको धुलो नियन्त्रण गर्ने भन्दै योजनाचाही ल्याएको छ । योजना मात्रै आउछ कार्यान्वयन भने कहिल्यै भएको देखिदैन
त्यस्तो चाहिँ हुन्न है !
हिजो संसद्ले थ्रेसहोल्डका बारेमा गरेको निर्णयले गर्दा धरहरा चिन्तित भएको छ। किनकि पहिला एक सिट नजिते पनि समानुपातिकबाट प्याट्ट सांसद पड्काइरहेका महानुभावहरूलाई अब त्यो पदमा जान अवरोध सिर्जना हुने अवस्था